Waa imisa nuuc naasaha Dumarka iyo kan ugu macaan uguna taabsi fiican ka baro fartun xaaji | Gaaloos.com
Home » galmada » Waa imisa nuuc naasaha Dumarka iyo kan ugu macaan uguna taabsi fiican ka baro fartun xaaji
Waa imisa nuuc naasaha Dumarka iyo kan ugu macaan uguna taabsi fiican ka baro fartun xaaji
Waxaan ahay inan Soomaaliyeed waxaan guursaday nin iga weyn. Markii aan baranayey waxaan ku arkay inuu yahay muqayil yacni sigaar iyo jaad ayuu isticmaalaa. Waa nin shaqaysta, maalintii ilaa 2:30pm wuxuu ku maqan yahay shaqo markuu guriga yimaado wuu qadeeyaa, isla markii uu qadeeyo wuxuu aadaa magaalada iyo jaad. Habeenkii wuxuu yimaadaa 10:30 pm markuu soo galo wuxuu qaataa computer-kiisa fadhiga ayuu fariistaa ilaa 02:00am midnight,
Halkaan Riix Kadib Daawo Muqaalka
markaas ayuu haddana laptopkiisa qaataa oo jiifka soo galaa oo seexdaa waxa uuna ku mashquula akhrinta arimaha bulshada ee webkasirhufan.com lagu soo dabaco.
Title: Waa imisa nuuc naasaha Dumarka iyo kan ugu macaan uguna taabsi fiican ka baro fartun xaaji